September 29, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့ကြတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ဒုတိယမြောက် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ PSG ဟာ မန်ချက်စတာ စီးတီး ကို ပြင်သစ်မြေပေါ်မှာ ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အတွက် ပွဲအစ ၈ မိနစ်မှာတင် ကွင်းလယ်လူ ဂူအိုင်းက ဂိုးစတင် သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယဂိုး ကိုတော့ ၇၄ မိနစ် မှာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ က သွင်းယူ ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီဂိုး ဟာ မက်ဆီ အတွက် PSG ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံး သွင်းဂိုးလည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီနှစ် မှ ချန်ပီယံလိဂ် ကို စတင် ဝင်ပြိုင်ဖူးတဲ့ မော်ဒိုဗာ ကလပ်လေး ရှရစ် ကတော့ နောက်ထပ် အံ့အားသင့်ဖွယ် တခုကို လုပ်ပြ ခဲ့ပြန်ပါတယ် ။
အုပ်စု အဖွင့်ပွဲမှာ ရှက်တာ ဒိုးနက် ကို အနိုင်ကစား ခဲ့တဲ့ ရှရစ် ဟာ ဒုတိယမြောက် ပွဲမှာလည်း ဥရောပ ရဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ဘာနေဗျူး ကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြသွားခဲ့ ပြန်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ရှရစ် ဟာ ၂ ပွဲ ကစား အပြီးမှာ ၆ မှတ် နဲ့ အုပ်စု ကို ဦးဆောင် နေပြီး ရီးရဲ ကတော့ ၃ မှတ် နဲ့ ဒုတိယ နေရာကို ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာ မီလန် နဲ့ ရှက်တာ ဒိုးနက် တို့ရဲ့ ပွဲကတော့ ဂိုးမရှိ သရေ ရလဒ် နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ ပါတယ် ။
မီလန် မှာ ကစားခဲ့တဲ့ အေစီမီလန် နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ရဲ့ ပွဲစဉ် မှာတော့ ဧည့်သည့် အေတီကို က ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အေစီဟာ မိနစ် ၂၀ ကတည်းက ဂိုးစသွင်းပြီး ဦးဆောင် နေခဲ့ ပေမယ့် ၂၉ မိနစ် မှာ ဖရန့် ကတ်ဆီ အငြင်းပွားဖွယ် ထုတ်ပယ် ခံရပြီး မှာတော့ ဧည့်သည် အသင်းရဲ့ ဖိကစားမှုကို ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာ ၈၄ မိနစ် မှာ ဂရစ်ဇ်မန်း ရဲ့ ချေပဂိုး ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၉၀+၇ မိနစ် မှာ ပင်နယ်တီ ကနေ လူးဝစ် ဆွာရက် က အနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကတော့ ပေါ်တို ကို အဝေးကွင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာ ကစားသွားခဲ့ပြီး ၅-၁ ရလဒ် နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့ ပါတယ် ။ လီဗာပူး အတွက် ဆာလာ နဲ့ ဖာမီနို တို့က ၂ ဂိုးစီ သွင်းပေး ခဲ့ပြီး မာနေး က ကျန် ၁ ဂိုးကို သွင်းပေး ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခြားပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ အိုင်ယက်စ် က ဘက်ဆစ်တပ် ကို ၂ – ၀ ၊ ဒေါ့မွန် က စပို့တင်း ကို ၁ – ၀ တို့ နဲ့ အသီးသီး အနိုင် ရရှိကာ အုပ်စုတွင်းမှာ ၆ မှတ်စီ နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်နေကြပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကလပ် ဘရုဂေး ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ လိုက်ပ်ဇစ် ကို အနိုင် ကစားပြီး အုပ်စု A မှာ PSG နဲ့ အတူ ၄ မှတ်စီ နဲ့ ဇယားထိပ် မှာ နေရာယူ နေခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ အတွက် ဂိုးသွင်းယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘန်ဇီးမား နဲ့ PSG အတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ မက်ဆီ တို့ ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ၁၇ ရာသီ ဆက်တိုက် ဂိုးသွင်းယူ နိုင်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဘန်ဇီးမား ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုး ၇၂ ဂိုး နဲ့ အတူ ရာအူးလ် ဂွန်ဇာလက် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရိုနယ်ဒို ၊ မက်ဆီ ၊ လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့ ပြီးပါက ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူသူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလာ ဟာလည်း ဆင်မြူရယ် အီတူး ရဲ့ ဂိုးအရေအတွက်ကို ကျော်ကာ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဒုတိယမြောက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူတဲ့ အာဖရိကသား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆာလာ ရဲ့ အရှေ့ မှာတော့ ၄၄ ဂိုး သွင်းထားတဲ့ ဒရော့ဘာ တဦးသာ ရှိနေတောတာပါ ။
ဒဏ်ရာကြောင့် ပေါ်တို နဲ့ ပွဲမှာ မပါဝင် နိုင်ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး နောက်ခံလူ အလက်ဇန်းဒါး အာနိုးလ် ဟာ ပိတ်ရက် မှာ ကစားမယ့် မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲ ကိုပါ လွဲချော်မယ့် အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အသင်းတွေ ဟာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု အများဆုံး ပြုလုပ် ထားတဲ့ ကလပ် အသင်းတွေ ကို ဆုကြေး အဖြစ် ချီးမြှင့် သွားမယ့် အစီအစဉ် ကို ရေးဆွဲ နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ အာရွန် ရမ်ဆေး ကတော့ ကြွက်သား ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကြောင့် ဒီညမှာ ကစားမယ့် ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပွဲကို ပါဝင် နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ ကတော့ ဘာနာဒက်စ်ချီ ၊ ရာဘီယော့ ၊ ချီယေဆာ နဲ့ မွိုက်စ်ကင်း တို့ ၄ ဦး ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင်လာကြမယ် လို့ အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် ဂိုးသမားကြီး ဒေးဗစ် ဆီးမင်း ဟာ စပါး နဲ့ ပွဲမှာ လက်စွမ်းပြ ကာကွယ် ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် ရဲ့ အင်္ဂလန် ဂိုးသမား ရမ်းစ်ဒဲလ် ကို ချီးကျုး ပြောဆိုခဲ့ပြီး အနာဂါတ် မှာ ပစ်ဖိုဒ့် ရဲ့ နေရာကို ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ဖို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
Previous Article ပီအက်ဂျီ vs မန်စီးတီး?? ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ၂ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
Next Article ဘစ်ဆာကာ ကို ၂ ပွဲလက်လွှတ်ရမယ့် ယူနိုက်တက် ၊ နှစ်ကုန်ထိ နားရတော့မယ့် ရှာကာ ၊ ရွှေဘောလုံးအတွက် ကောလဟာလ တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ